Uzoludlulisela enkantolo owavalelwa umazisi | News24
Uzoludlulisela enkantolo owavalelwa umazisi
OWESILISA wase-France uthi usefuna ukulidlulisela eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu udaba lokuvalwa kwamazisi wakhe ngaphandle kwesizathu ngoba noMnyango wezaseKhaya kuleli dolobha uhluleka ukulixazulula lolu daba.
UMnuz Simon Phiri (65) uthi sekuphele iminyaka emithathu egqigqa eMnyangweni wezaseKhaya kodwa akalutholi usizo.
I-Echo yashicilela lolu daba ngomhla ka-15 kuNhlolanja (February) nalapho umnyango wathembisa khona ukulusukumela udaba lwakhe kodwa kuze kube yimanje uMnuz Phiri uthi akukho abasamsize ngakho.
Uthe: “Bangitshela into eyodwa namanje ukuthi ngingowaseMalawi yingakho bawuvala umazisi wami. Into engixakayo ukuthi kungani bekungaveli lokhu sonke lesi sikhathi kuze kuvela manje? Ngikhathele manje ukwehla ngenyuka leli hhovisi ekubeni alingangisizi ngalutho ekugcineni.
“Senginqume ukuthi ngizoluthatha lolu daba ngiludlulisele enkantolo ngoba uMnyango awungicaciseli ukuthi uyangisiza noma cha. Kuyimanje ngimatasa ngixoxisana nommeli ukuze sizokwazi ukuya enkantolo. Sengikhathele ukukhuluma manje. Impilo yami imile angikwazi kwenza lutho. Angikwazi ngisho ukusebenza ngoba anginamazisi sengiphila ngokubamba amatoho.”
“Uphinde waveza ukuthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lowo owayengummeli wakhe ekuqaleni ngesikhathi eqala ukulwa lolu daba useyamusongela uthi akahlukane nokulokhu elulandela lolu daba okanye esho ukuthi wake wamsiza ekutholeni isixazululo.
“Akusikona okokuqala engisongela ngemiqhafazo angithumelela yona. Angimazi ukuthi ungifunani ngoba ngamukhokhela yonke imali yakhe ngesikhathi engisiza. Ngamutshela futhi nangesikhathi sengimushiya ukuthi sengifuna ukuzama ezinye izindlela zokuthola usizo ngomazisi wami ngoba kwase kuphele unyaka senza into eyodwa kodwa ngingayiboni inqubekela phambili.
“Kwakufana nokuthi ngikhokhela amahhala ngoba wayevele ahambe ayohlala ehhovisi lalo mnyango eliku-Church Street aqede angangisizi ngalutho,” kubeka yena.
Ebuzwa ukuthi kungani engamvuleli icala lommeli uthe okwamanje usafuna ukubhekana nodaba lwakhe lukamazisi.
Ufunge wagomela ukuthi ngeke aze aphinde alubhade unyawo lwakhe emahhovisi lalo mnyango elisedolobheni laseMgungundlovu.